त्यो अबोध बालक | मझेरी डट कम
त्यो अबोध बालक
kbs — Wed, 08/25/2010 - 18:57
सृष्टि बि. रेग्मी
एकादेशमा एउटा बालक थियो । त्यसको नाम हरि थियो । उसका बुबाआमा ज्यालामजदुरी गर्दथे । केही समयपछि बुबाआमाको पनि मृत्यु भयो । घरमा ऊ एक्लै बस्दथ्यो ।
एकदिन हरिको घरमा एउटा अपरिचित व्यक्ति आयो । उसले हरिलाई म तिम्रो बुबाको साथी हुँ , तिम्रो अङ्कल म तिमीलाई सहर लगेर काम दिन्छु । तिमीले त्यहाँ मज्जाले बसेर खान पाउँछौ भन्यो । हरि त्यस अपरिचित व्यक्तिका कुरामा विभिन्न सपनाहरू देख्दै सहरतिर लाग्यो ।
टक्क बस रोकियो । त्यस बसबाट अङ्कल भनाउँदो अपरिचित व्यक्ति र हरि निस्के । त्यस व्यक्तिले हरिलाई एउटा कोठामा बसाल्यो र यहीँ बस भनेर उ त्यहाँबाट निस्क्यो । हरि पनि यो मान्छे कहाँ जाँदो रहेछ भनेर पछि लाग्यो । त्यो व्यक्ति एउटा ठूलो घरमा पुग्यो ।
अपरिचित व्यक्तिले एकजना आइमाईसँग कुरा गर्यो । हरिले तिनीहरूको कुरा सुन्यो । ऊ छाँगाबाट खसे झैँ भयो । किनकी तिनीहरू त बालक बेच्ने दलाल रहेछन् र त्यो व्यक्तिले हरिलाई त्यो मोटीआइमाईसँग बेचेको पो रहेछ ।
कुरा सुन्ने बित्तिकै हरि त्यहाँबाट भाग्यो । हरि सडकमा भौँतारिरहेको बेला एक मनिसले मेरो नाम धर्मबहादुर हो । मेरो एउटा अनाथ आश्रम छ । म तिमीलाई त्यहाँ लग्छु । तिमी जस्तै धेरै अनाथ बस्दछन् । भन्यो । हरिले "नाई म जान्न" भन्यो । धर्मबहादुरले मेरो विश्वास गर भन्यो । हरिले मनमनै एकचोटि गएर हेर्दैमा के जाला र भनेर ऊ धर्मबहादुरसँग गयो । नभन्दै त्यहाँ एउटा ठूलो बिल्डिङ थियो त्यहाँ हरि जस्तै अरू बालकहरू थिए ।
हरि त्यहाँ बसेर राम्रोसँग पढ्यो । डाक्टर बनेर धेरै पैसा कमायो । एउटा अनाथालय र वृद्धाआश्रम खोल्यो । पछि उसले राम्री केटीसँग विवाह गर्‍यो । यसरी उसले जीवन निर्वाह गर्‍यो ।
सृष्टि बि. रेग्मी, कक्षा ः १०
श्री त्रि.ज.उ,मा.वि. खलङ्गा, रुकुम ।
tapai ko katha suner akdam
अतिथि — Sun, 08/29/2010 - 14:16
tapai ko katha suner akdam kusi lagyo tapai katha choto mitho chha asarinai afno kalam lai nirantar dinu hola yo mro nurodh tapai ko lagi..
मिस्ड कल सार्वजनिक
घनघस्याको उकालोदेखि ऐसेलुखर्कसम्म
ब्याक्टेरिया र भाइरसको सपना
दस हजार तालको राज्यमा घुम्दा
मेची क्याम्पस भद्रपुरकाे सूचना
मेरो साथी पुतली
दुई आत्मा मिलाएर परेवाझैं जोडी